Kuweit: “Mitsangàna ary miadia ho an’ny tanoranao!” · Global Voices teny Malagasy
Kuweit: “Mitsangàna ary miadia ho an'ny tanoranao!”
MpanoratraDareen Al Saad
Voadika ny 09 Desambra 2010 8:23 GMT
I Abdulla Al-Moussawi, antsoia koa hoe “Sayed, ilay vatosoan'i Arabia,” izay heverina ho Maradona any aoriana, no niteraka resabe tao amin'ny bilaogin'i Mark.
Mpana-talenta vao sivy taona monja i Abdulla, afaka jerenao eto amin'ity sary mihetsika ao amin'ny YouTube ity ny filalaovany baolina kitra. Ity sarimihetsika ity no hitan'i Marcel, terantany néerlandais mpitsikilo izay mpilalao tanora mendrika indrindra, ka nahagaga sy nahavariana azy. Nifandray tamin'ny fianakaviany i Marcel ary tonga tany Koweit mihitsy hijery maso ity manana talenta ity, ary nanao fifampiraharahana tamin'ny fanjakana any Koweit hahazoan'i Abdulla mifindra monina any Hollande miaraka amin'ny fianakaviany hahafahany manao fanazaran-tena hahatonga azy, araka ny filazan'i Marcel, ho “ny anankiray amin'ireo mpilalao baolina kitra goavana indrindra teo amin'ny tantara !”
Taorian'ny fifanarahana ela dia nanambara ny fanjakana any Koweit fa izy no “hiantoka an'i Abdulla sy ny fianakaviany” amin'izany. Kanefa araka ny filazan'i Marcel dia “tsy nanao akory ry zareo”.
Izay indrindra, no nahatonga ny fanontaniana manaraka : hatraiza no hiantohan'ny fanjakana tanora sy ny manan-talenta eo aminy, hatraiza no hiantohany ny fianakaviany, ary nahoana moa izy no hanao izany amin'ny tanora avy any Koweit anankiray izay mety ho lasa mpilalao ao amin'ny ekipam-pirenena any Hollande?
Mamehy izany rehetra izany i Marcel:
… Na dia tsy misy mahafantatra aza izay mety hiseho any aoriana, ny fandavana ny fivoarana tokana ho an'ny ankizy kely satria mety ho lasa mpilalao ao amin'ny ekipam-pirenena any Hollande izy dia tsy fahazoana na inona na inona ihany, araka ny hevitro, “Koweit, miadia ho an'ny tanoranao!”
…. Azoko antoka fa ny fanjakana rehetra nofidian'ny vahoakany dia tsy maintsy manampy izany vahoaka miankina aminy izany. tsy ho azy irery, fa ho an'ny hoavin'ny fireneny koa.
…. Tsy te ho maritiora ny ray aman-drenin'i Abdulla. Satria tsy izany tokoa izy ireo. Fianakaviana afaka mirehareha iray any Koweit izy ireo, izayte hanabe ny zanany amin'ny tsara araka izay azony atao. tahaka ny fianakaviana rehetra ihany. Nanam-bitana koa izy ireo fa manan-janaka manam-pahaizana. Na dia mahafinaritra aza izany tamin'ny voalohany dia mitaky sorona betsaka ay amin'ny fianakaviany ihany. Te hanao tokoa izy ireo, kanefa raha tsy misy fanampiana dia tsy ho vitany. Ny zavatra tsy fahita firy dia mitaky vahaolana tsy fahita firy koa. Amin'ity zava-misy manokana ity, dia zava-dehibe ny fahazoana miankina amin'ny fianakaviana sy ny firenena ary ny fanjakana. Raha tsy mandray andraikitra tanteraka ry zareo dia tsy ho tanteraka izy ity.
Nanaovana sarimihetsika fanadihadihana tany Hollande i Abdulla, nelafa tao amin'ny fahitalav-panjakana izany ary natolotra tany Dubaï, nandritra ny Gulf Film 2009. Nanjary olona fanta-daza any amin'ny fampahalalam-baovao any Hollande izy.
Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny sarimihetsika dia manome rariny an'i marcel daholo fa manankiana ny fanjakana any Koweit kosa tamin'ny tsy fandraisany andraikitra, ny tsy firaharahiany ary ny tsy fanampiany an'i Abdulla hampivoarana ny talentany, satria izy no afaka miantsoroka izany fandaniana rehetra izany. Tiany kosa koa ny toe-tsaina fandraisana andraikitra ananan'i Marcel, izay nanapa-kevitra fa hanampy an'i Abdulla amin'ny fandefasana azy hanaraka fiofanana any Hollande mandritra ny telo volana, alohan'ny tsy nahatanterah'i Koweit ny teny nomeny, izay nahatonga an'i Abdulla sy ny fianakviany hiverina hody any Koweit indray.
Ao amin'ny fanehoan-kevitra i Nael no manoratra:
Indrisy fa iainan'ny ankamaroan'ny Arabo izany toe-javatra izany, tsy tiana ny olona manan-talenta sy manam-pahaizana, ka aleony mipetraka any amin'izay firenena manaiky azy…
Tsy mahamenatra ve ny fandavana ny tsy fahafantarana sy ny tsy fampirisihana ny olona manan-talenta? Nahita olona mampihomehy milalao baolina aho eny amin'ny arabe eny, ary izy ireny dia afaka handefa ny ekipam-pirenena hangoron-damba. nandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra i Koweit efa tamin'ny fahagola, ary mety afaka handray anjara indray izy. Koweit, ampio i Sayed, ampio izy sy ny tanora manan-talenta hafa, na dia midika aza izany fa hivelatra any amin'ny firenena hafa ankoatry ny efitra misy antsika ry zareo. Marcel – MANKASITRAKA anao nahatsikaritra ity manan-talenta tanora ity – ireo mpilalao baolina kitra marobe nivoaka avy any Hollande no nahatanteraka ny nofinofiny noho ny fisian'ny olona toa anao. Misaotra an'i Hollande nanana eritreritra handray an-tanana ny talentany. Koweit, mahamenatra ny ataonao:(
Ary AB nanamarika:
Inona no ilana ny Ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahan-tena raha tsy afaka hijery ny talentan'ity zaza ity ka hanampy azy hahatongavany ho anankiray amin'ny mpilalao baolina kitra malaza eran-tany? Ny fanampiana ity zaza ity no mety hanamarika ny hoavin'ny baolina kitra aty Koweit. Maniry aho ny hisian'ny olona ambony mamaky ity soratra ity ka hitondra fanamarihana mialoha…
Inona no hiafaran'i “Maradona vaovao”?